अंग्रेजी पाठ र अंग्रेजी अक्षर भनिने यस पाठमा हामी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमालामा अक्षरहरू, अंग्रेजी अक्षरहरूको उच्चारण र लेखन सिक्नेछौं। हाम्रो अंग्रेजी वर्णमाला व्याख्यानमा, हामी अंग्रेजी अक्षरहरू बारे नमूना वाक्यहरू पनि समावेश गर्दछौं।
अंग्रेजी वर्णमालाले टर्कीले जस्तै ल्याटिन वर्णमालामा अक्षरहरू प्रयोग गर्दछ। यस लेखमा अंग्रेजी वर्णमाला तपाईले यो विषय सिक्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी अक्षरहरूको हिज्जे र अंग्रेजी वर्णमाला उच्चारण तपाई लेक्चर देख्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी वर्णमालामा कति अक्षरहरू छन्?
अंग्रेजी वर्णमाला; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, यो कुल २ letters अक्षरहरू हो, Z सहित। यी मध्ये २१ वटा व्यञ्जन हुन् र are स्वर हुन्छन्। अ the्ग्रेजी भाषामा स्वरहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरूलाई सिक्न गाह्रो छ किनकि उनीहरूले लामो र छोटो आवाज गर्न सक्दछन्। टर्की जस्तो छैन अक्षर q, w, x त्यहाँ।
टर्कीमा ç, ğ, ö, ş, letters अक्षरहरू अंग्रेजीमा फेला पर्दैन। यो एक यस्तो भाषा हो जुन पढिएको छैन किनकि यो अंग्रेजीमा लेखिएको छ। थप रूपमा, सानो अक्षरहरूको हिज्जे ठूलो अक्षरको रूपमा पनि फरक हुन्छ।
अब हामी चित्रहरूका साथ अंग्रेजी वर्णमाला दिन्छौं। पछि, हामी सबै अक्षरहरू सूचीबद्ध र नमूना शब्दहरूको साथ प्रत्येक अक्षरको उच्चारण वर्णन गर्दछौं।
अंग्रेजी वर्णमाला - तस्वीरहरूका साथ
अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर र उच्चारण
तलको सूचीमा तपाईले अंग्रेजी शब्दलाई सानो वर्ण र ठूलो अक्षर बनाउँने शब्दहरूको हिज्जे पाउन सक्नुहुनेछ, साथै तिनीहरूको उच्चारण पनि। तपाइँको पढ्ने सीप सुधार गर्न र तपाइँको अंग्रेजी सीपमा बढि भरोसा राख्न वर्णमाला जान्न आवश्यक छ। यस सूचीमा तपाईले प्रत्येक अक्षर उच्च र सानो अक्षरमा उच्चारण गरेर फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
h - H - अपर्चर
i - I - महिना
l - L - हात
यू - यू - यू
w - W - विसरित
x - X - पूर्व
y - Y - वाह
विशेष गरी जब प्रिस्कूल र प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी अक्षरहरू पढाउँदै वर्णमाला गीत वा अंग्रेजी अक्षर भिडियो तपाईं संग समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सजिलैसँग यस विषयलाई नमूना वाक्यहरूको उच्चारणहरू ठूलो स्वरले उच्चारण गरेर र प्रत्येक अक्षर कसरी उच्चारण गरिन्छ सुन्नबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। एकै साथ, जब तपाईं विदेशी टिभी श्रृंखला वा अंग्रेजी उपशीर्षकहरू र अ voice्ग्रेजी भ्वाइसओभरहरूको साथ फिल्महरू हेर्नुहुन्छ, तपाईं सजिलैसँग वाक्यको हिज्जे र उच्चारण दुवै देख्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी अक्षरहरू कसरी पढ्ने
अ A्ग्रेजीमा कसरी पत्र पढ्ने?
आयु (eyc): उमेर
जनावर (एनिमल): जनावर
अंग्रेजीमा लेटर बी कसरी पढ्ने?
चरा (बरर्ड): चरा
अंग्रेजीमा लेटर सी कसरी पढ्ने?
अंग्रेजीमा क्यापिटल O र सानो तीन अक्षरहरू छैनन्। अक्षर C को उच्चारण अलग छ जुन शब्दमा यो रहेको छ। मुख्य कुरा के हो भने, जब अक्षर सी र एच सँगसँगै हुन्छन्, प्राय: अक्षर अक्षर तीन देखिन्छ। यो शब्दको भाषा मूल अनुसार "ch" "के" पनि आवाज गर्न सक्दछ।
आउनुहोस् (क्यामरा): आउनुहोस्
शहर (siti): शहर
अ D्ग्रेजीमा लेटर डी कसरी पढ्ने?
कुकुर (कुकुर): कुकुर
अंग्रेजीमा लेटर ई कसरी पढ्ने?
अक्षर E को पनि शव्दको उत्पत्ति अनुसार फरक उच्चारण हुन्छ।
अण्डा (जस्तै): अण्डा
आँखा (चन्द्रमा): आँखा
Eat (iit): खानको लागि
अंग्रेजीमा लेटर एफ कसरी पढ्ने?
परिवार (स्त्री): परिवार
अ G्ग्रेजीमा लेटर जी कसरी पढ्ने?
अंग्रेजी वर्णमालामा कुनै "ğ" छैन।
खेल (समलिंगी): खेल
केटी (हेर्नुहोस्): केटी
अ H्ग्रेजीमा लेटर एच कसरी पढ्ने?
खुशी (hepi): खुसी
टोपी (हेट): टोपी
अंग्रेजी पत्र I कसरी पढ्ने?
के मसँग अंग्रेजीमा छ? पत्रमा म रमाईलो / चाखलाग्दो शब्द, हामी यो पत्र को संरचना मा परिवर्तन देख्न सक्छौं। अंग्रेजीमा कुनै पूंजी I र लोअरकेस I अक्षरहरू छैनन्।
म (महिना): I
बरफ (ays): बरफ
अ J्ग्रेजीमा लेटर जे कसरी पढ्ने?
जोड्नुहोस् (सिक्का): सामेल हुनुहोस्
जम्प (शिविर): जम्प
अ K्ग्रेजीमा पत्र के पढ्ने कसरी?
अक्षर K यस शब्दमा फरक छ जुन यो अवस्थित छ।
राजा (राजा): राजा
जान्नुहोस् (नोभ): जान्नको लागि
नोट: अक्षर K सँगसँगै हुँदा अक्षर k पढ्दैन।
अ L्ग्रेजीमा लेटर एल कसरी पढ्ने?
भाषा (lenguic): भाषा
अ M्ग्रेजीमा लेटर एम कसरी पढ्ने?
पैसा (उन्माद): पैसा
आमा (मदिर): आमा
अंग्रेजीमा लेटर एन कसरी पढ्ने?
नाम (नीम): नाम
नयाँ (niüv): नयाँ
नौ (नयन): नौ
अ O्ग्रेजीमा लेटर ओ कसरी पढ्ने?
अंग्रेजी वर्णमालामा कुनै माथिल्लो र सानो अक्षरहरू छैनन्।
खुला (छलफल): खोल्नुहोस्
एक (भ्यान): एक
अंग्रेजीमा लेटर पी कसरी पढ्ने?
चित्र (पिकर): चित्र
प्ले गर्नुहोस् (प्ले गर्नुहोस्): खेल्नुहोस्, खेल्नुहोस्
अ Q्ग्रेजीमा लेटर क्यू कसरी पढ्ने?
द्रुत (कुइक): द्रुत
अंग्रेजीमा लेटर एस कसरी पढ्ने?
अंग्रेजीमा कुनै अक्षर छैन "ş"। जब अक्षर S र h सँगसँगै हुन्छ, यसले "ş" आवाज दिन्छ।
सागर (sii): समुद्र
कथा (सिटेरियन): कथा
अंग्रेजीमा लेटर टी कसरी पढ्ने?
जब अक्षर "th" सँगसँगै हुन्छन्, उच्चारण शब्दको मूलको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
तालिका (टेप): तालिका
सोच्नुहोस् (tink): सोच्न को लागी
यो (डिस): यो
अंग्रेजीमा लेटर U कसरी पढ्ने?
अंग्रेजीमा कुनै अक्षर छैन "ü"।
प्रयोग (yuuz): प्रयोग गर्न
सामान्य (yujıl): सामान्य
अन्तर्गत (क्षण): अन्तर्गत
अंग्रेजीमा लेटर वी कसरी पढ्ने?
धेरै (डाटा): धेरै
भ्रमण (भ्रमण): भ्रमण गर्नुहोस्
आवाज (आवाज): आवाज
अ W्ग्रेजीमा लेटर डब्लू कसरी पढ्ने?
युद्ध (भोर): युद्ध
गलत (रong्ग): गलत
नोट: जब अक्षरहरू "wr" सँगसँगै हुन्छन्, W पढ्न सकिदैन, अर्थात V ध्वनि सुनेन।
अ X्ग्रेजीमा लेटर एक्स कसरी पढ्ने?
एक्स-रे (पूर्व-रे): एक्स-रे
जेरोक्स (जिरोक्स): कपीयर
अ Y्ग्रेजीमा लेटर वाई कसरी पढ्ने?
हो (हो): हो
युवा (याang): जवान
अ Z्ग्रेजीमा लेटर जेड कसरी पढ्ने?
चिडियाखाना (züu): चिडियाखाना
शून्य (जीरो): शून्य
अ letters्ग्रेजी अक्षर अभ्यास गर्न धेरै अंग्रेजी संक्षिप्त विवरण, अंग्रेजीमा नम्बरहरू कसरी लेख्नेतपाईंले शिर्षक जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यस विषयका नमूना वाक्यहरू वा नमूना पाठहरू पढेर तपाईं आफ्नो अभ्यासलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी वर्णमाला भिडियोहरू हेर्दा र अ al्ग्रेजी वर्णमाला गीतहरू सुन्नाले तपाईंलाई यस सम्बन्धमा धेरै प्रगति दिनेछ।
प्रिय साथीहरु, तपाई अंग्रेजी वर्णमालाको शीर्षक पढ्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं हाम्रा सबै अंग्रेजी पाठहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: अंग्रेजी पाठ
अंग्रेजी वर्णमाला ईतिहास
अंग्रेजी; यसमा फ्रान्सेली, ग्रीक, र ल्याटिन सहित धेरै फरक भाषाहरूका शब्दहरू छन्। तपाई यो धेरै अंग्रेजी शब्दहरुको हिज्जेमा देख्न सक्नुहुन्छ। एक अंग्रेजी फोनेटिक नियम अनुसरण गर्दछ; यद्यपि यी थपिएका शब्दहरूको कारण नियमहरू सिक्न र लागू गर्न जटिल छन्।
१ 1835 सम्म अ the्ग्रेजी वर्णमालामा २ letters अक्षरहरू थिए: "Z" पछाडि वर्णमालाको २th औं अक्षर "र" चिन्ह (र) थियो।
आज, अंग्रेजी वर्णमाला (वा आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला) मा २p अक्षरहरू छन्: पुरानो अंग्रेजीबाट २ 26 र पछि थपियो।
अंग्रेजी वर्णमाला लिरिक्स
VW र XYZ
म मेरो एबीसी गाउन सक्छु,
के तिमी मसँग गाउँदैनौ?
इलिमेन्टरी स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी पत्रहरू कसरी सिकाउने?
अ studying्ग्रेजी पढ्दै गर्दा, प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक अक्षरहरूको शीर्षकको साथ शुरू गर्नेछन्। यस विषयमा अगाडि बढ्नको लागि, तपाईं उमेर अनुसार भिन्नता बनाउन सक्नुहुन्छ; हामी lesson-5 बर्ष उमेरका बच्चाहरुका लागि प्रत्येक पाठ teaching अक्षर र years बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि प्रत्येक अक्षर letters अक्षर पढाउने सल्लाह दिन्छौं तपाईं साना अक्षरहरूको साथ सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र ठूला अक्षरहरूमा जान सक्नुहुनेछ विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग सिके पछि।
जब तपाई प्रत्येक पत्र सिकाउनुहुन्छ, तपाई अभ्यास गर्न र प्रत्येक पत्र लाई सुदृढीकरण गर्न गतिविधिहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक उदाहरण गतिविधि;
बच्चाहरू ब्ल्याकबोर्ड वा व्हाइटबोर्डमा लेख्न मन पराउँछन्। प्रत्येक पत्र सिकाए पछि, एक विद्यार्थीलाई चाक / मार्कर दिनुहोस् र बोर्डमा पत्र लेख्नको लागि सोध्नुहोस् (सकेसम्म ठूलो)। तपाईले प्रत्येक पत्रका लागि एक भन्दा बढि विद्यार्थीहरू यो गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को व्यायाम हुन सक्छ उहाँलाई सोध्नको लागि आफ्नो नामलाई अक्षरहरूमा विभाजित गर्नुहोस्। उदाहरण पाठ दिनुहोस्;
प्रश्नहरू जुन हिज्जेको बारेमा सोधिन्छ,
- "तपाइँ कसरी आफ्नो नामको हिज्जे गर्नुहुन्छ?"
- "तपाईको नाम हिज्जे गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया?"
- "मेरो नाम मेटे हो, METE"
एक व्यक्तिलाई उसको नाम र कसरी हिज्जे भनेर सोध्नुहोस्। र त्यसपछि उसलाई तपाइँको नाम र हिज्जे परिचय। यहाँ एक उदाहरण छ:
-तिम्रो नाम के हो?
मेरो नाम ……।
- तपाईं कसरी आफ्नो नामको हिज्जे गर्नुहुन्छ?
यो… .. -… .. -… .. -
अंग्रेजी वर्णमाला नमूना प्रश्नहरू
अंग्रेजी वर्णमालामा A अक्षर कसरी उच्चारण गर्ने?
अंग्रेजी वर्णमालामा W W कसरी उच्चारण गर्ने?
B. dublu र
सी। डबल र
तलको कुन अक्षर तुर्कीमा उपलब्ध छ तर अ in्ग्रेजीमा छैन?
तलका कुन अक्षर अ English्ग्रेजीमा उपलब्ध छ तर टर्कीमा छैन?
निम्नलिखित मध्ये कुन अंग्रेजी वर्णमालामा ZED को रूपमा पढिएको हो?
अंग्रेजी वर्णमालामा J अक्षर कसरी उच्चारण गर्ने?
तलका कुन अक्षर अंग्रेजी वर्णमालामा उपलब्ध छैन?
निम्नमध्ये कुन व्यञ्जन हुनुहुन्छ?
अंग्रेजीमा M M कसरी उच्चारण गर्ने?
अu्ग्रेजीमा एक अर्काको अगाडि अक्षर कसरी उच्चारण गर्ने?
अंग्रेजीमा एक अर्काको अगाडि अक्षरहरू कसरी उच्चारण गर्ने?
कसरी शब्द लेख्ने?
कसरी शब्द योजना उच्चारण गर्ने?
सामान्य रूपमा अंग्रेजी वर्णमाला विषय अभिव्यक्ति यो पहिलो नजर मा सरल लाग्न सक्छ। तर तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि प्रत्येक अक्षरको धेरै फरक उच्चारण हुन सक्छ। केही अक्षरहरू टर्कीमा फेला परेनन्। यस लेखमा, हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईको भ्रम खाली पार्नु र अ learning्ग्रेजी वर्णमाला सीखनालाई बढी तनावमुक्त बनाउनु हो।
अ English्ग्रेजी पत्रहरू सजिलैसँग कसरी मेमोरी गर्ने?
यस अध्यायमा सजीलै अंग्रेजी अक्षरहरू याद गर्नुहोस् हामी तपाईंको लागि केहि युक्तिहरू दिनेछौं।
प्रत्येक अक्षर कसरी उच्चारण गर्ने सिक्न देशी वक्ताको कुरा सुन्न महत्त्वपूर्ण छ। याद गर्नुहोस् कि अंग्रेजीमा बोल्नेलाई बुझ्नको लागि यो धेरै कठिन हुनेछ। यदि तपाईं अ to्ग्रेजीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईं अंग्रेजी पढाउनेलाई अंग्रेजी सिकाउन डिजाइन गरिएको अंग्रेजी पोडकास्ट सुन्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आफ्नै वर्णमाला गीत लेख्नुहोस्: वर्णमालामा गाउन वा तपाईंको मनपर्ने पप गीतको धुन अनुसार अक्षरहरू गाउने आफ्नै तरिका खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको आफ्नै गीत बनाएर, तपाईं गीतलाई अझ आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ।
विशेष शब्दहरूको साथ अक्षरहरू सम्बन्धित गर्नुहोस्। यसको गर्न सजिलो तरीका भनेको २ 26-शब्दको कथा लेख्नु जसमा प्रत्येक शव्द वर्णमालाको फरक अक्षरबाट सुरु हुन्छ।
“बिहानको खाजा पछि बिरालोहरूले सबै थोक ध्वस्त पारिदिए। माछा, खेलहरू, घरेलु चीजहरू… ”
तपाईको आफ्नै सम्झनाहरु प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाई कहानी जारी राख्नुहुन्छ र बदलीमा सबै २ letters अक्षरहरु प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो सही अर्थमा गर्नुपर्दैन! कथा जति अनौंठो छ, तपाईंलाई यो याद छ, यो व्यायाम अभ्यास गर्दा रमाइलो गर्न नबिर्सनुहोस्!
अp्ग्रेजी वर्णमाला सिक्दै गर्दा तपाईले दोहोर्याउनु हुँदैन र अक्षर उच्चारण सुन्नुहुन्न। प्रत्येक अक्षरको छेउमा सजिलैसँग याद गर्न सकिने शब्द सीख्दा तपाईंलाई अक्षरहरू राम्रोसँग सम्झन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। यसका लागि तपाईले प्रत्येक अक्षरको अगाडि दिएका शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अंग्रेजीमा अक्षरहरू हामी टर्कीमा लेख्ने र उच्चारण गर्ने तरिकाले बोल्दैनौं, आवाज फरक हुन्छ। अ letters्ग्रेजी अक्षरहरूको उच्चारण शब्दसँग फरक हुन्छ। यस भिन्नताको मुख्य कारण शब्द मूल हो। त्यसकारण, अंग्रेजीमा सबै अक्षरहरूको हिज्जे र उच्चारण फरक हुन्छ। यी अक्षरहरूले विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू बनाउँदछन्। वर्णमालामा अक्षरहरूको स than्ख्या भन्दा धेरै प्रकारका आवाजहरू छन् भन्ने तथ्यले वास्तवमा वर्णमाला सिक्न गाह्रो बनाउँछ। यद्यपि अक्षरहरू कण्ठ गर्न सजिलो छ, शब्दमा कुन ध्वनिको साथ कुन अक्षर पढिएको हो भन्नेमा यो गोलमाल हुन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले, तपाईं अंग्रेजी वर्णमाला गीतहरू सुन्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको अंग्रेजी वर्णमाला ज्ञान सिक्न र बलियो बनाउन। तपाईले सरल शब्दहरू र अक्षरहरू कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ अ .्ग्रेजी कार्टुनहरू हेरेर सिक्नको लागि अधिक सरल। अ r्ग्रेजी कविताहरू सुन्दा र कार्टुनहरू हेरेर तपाईंलाई अंग्रेजी वर्णमाला खुशीसँग सिक्न र सरल शब्दहरू स्पष्टसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ। अंग्रेजी शब्दहरूको उच्चारण सिक्न, तपाईं गतिविधिहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं बारम्बार बोल्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अp्ग्रेजी वर्णमाला सिक्नु भनेको अंग्रेजी सिक्ने पहिलो चरण हो।
केही विद्यार्थीहरू कुन कौशल अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेर जान्न चाहन्छन्। त्यसोभए उनीहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्णसँग सुरू गर्ने योजना गर्छन्। तिनीहरू सबै गणना गर्दछन्, किनकि सबै सीपहरू एक अर्कामा आधारित छन्। जे होस्, हामी संवाद गर्न अरू भन्दा धेरै कौशल प्रयोग गर्दछौं। उदाहरण को लागी, हामी कुराकानी गर्न को लागी 40०% समय खर्च गर्छौं, हामी केवल सुन्दै छौं। हामी समय को 35%% को लागी बोल्छौं। लगभग १%% संचार पढ्नेबाट आउँछ र and% लेखनबाट आउँछ। अ studying्ग्रेजी पढ्दै गर्दा एक किसिमको अध्ययन अर्कोतिर जान दिनुहोस्। उदाहरण को लागी, एक कहानी पढ्नुहोस् र त्यसपछि एक साथी संग यसको बारे मा कुरा गर्नुहोस्। चलचित्र हेर्नुहोस् र त्यसपछि यसको बारेमा लेख्नुहोस्।
स्क्र्याचबाट केहि पनि सुरू गर्न गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ कुनै भाषामा लेख्न सिक्नुहुन्छ जुन तपाइँको भन्दा बिलकुलै फरक छ। यो वास्तवमै पूर्ण रूपमा अज्ञात ठाउँमा एक्लै हिँड्नु जस्तै हो। तर तपाईं सजिलैसँग यो लेखमा समावेश उदाहरण र अभ्यासको साथ सिक्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ शब्दहरू सिक्न नोटबुक राख्नुहोस्। यहाँ, तपाईंले भर्खरै वर्णमाला क्रममा सिकेका शब्दहरू लेख्नुहोस्। त्यसोभए तपाईले प्रत्येक शब्द राम्रोसँग हेर्न र याद गर्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी अक्षर विषय व्याख्यान प्रशिक्षण सत्रको ठीक पछि अभ्यास गर्ने र परीक्षण प्रश्नहरूको समाधान नगर्नुहोस्। अ्ग्रेजी सजिलो र छिटो सिकिन्छ जब तपाईं यसलाई हरेक दिन खुलासा गर्नुहुन्छ।